'Red Redemption 2' Waxay Leedahay Dilal Dilaal Ah Oo Ku Dhex Jira Them Thar Hills - Ciyaaraha
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Red Redemption 2' Wuxuu Leeyahay Dilal Dilaal ah oo ku nool Them Thar Hills
'Red Redemption 2' Wuxuu Leeyahay Dilal Dilaal ah oo ku nool Them Thar Hills
Cafis wanaagsan haddii aad, sida aniga oo kale, wali aad ku dhex moosayso buuraha, dooxooyinka iyo hareeraha Red 2 furashada dhintay, markaa waad ogtahay inay jiraan waxyaabo badan oo laga ogaan karo meelaha buuraha leh. Waxyaabaha la soo helay waxay u dhexeeyaan hysterical ilaa iyo qabow-dang-right.
Mid ka mid ah helitaanadani waxay ahayd mid si cadaalad ah goor hore uun uga baxsan Valentine. Waxaan ogaaday ubaxyo fara badan oo is laalaada, waxaanan go'aansaday inaan baadho. Waxaan helay jir kali ah oo ka laadlaada dhismaha biriijka oo ay ku lifaaqan yihiin lifaaqyadiisa iyo xiidmaha. Madax madaxa ka go’an ayaa lagu qodbay tiir ay ku duuban tahay warqad duuban oo afkiisa ku dheggan. Ka dib markii aan furay, waxaan ogaaday inay ahayd qayb ka mid ah khariidad oo aan u aaday hawlgal si aan u gaaro salka tan.
Kuwa aqoonta durugsan u leh ciyaarta, waad ogtahay in adduunku furan yahay 'freakin' ballaaran. Raadinta seddex meyd waa labadaba balwad iyo cirbad guud oo ku jirta xaalada cowska. Ma aysan caawin taas, waan ka soo horjeeday inaan eego goobaha internetka. Xaaladaha ciyaarta qaarkood ayaa faa'iido badan leh marka si dabiici ah loo helo, ugu yaraan aniga ayaa iska leh.
Marka, ka dib baadhitaan dhammaystiran waxaan u horseeday laba muuqaal oo dil naxdin leh oo muraajacay kii ugu horreeyay. Mid kasta oo leh meydad la jeexjeexay iyo madax googo’ay oo lagu raray qayb ka mid ah khariiddada.
Markii la isku dhafo khariidada waxay horseed u tahay maqaasiin duufaan leh oo ka buuxan qaybo ka mid ah dhowr dhibbaneyaal nasiib darro ah. Intii aad raadineysay maqaayada miskiinka ah ee Arthur Morgan waa la garaacay oo la garaacay.
Markuu Arthur soo kaco, caato, cufnaan, Edmund Lowery Jr ayaa taagan korka Arthur oo sharraxaya waxqabadkiisa, iyo waxa uu u qorsheeyay cawlaha nasiib darrada ah.
Dhaqdhaqaaqyo dhowr ah oo dhaqso leh, Arthur wuxuu awoodaa inuu miiska beddelo oo uu dilo ama hogtie Edmund.
Waa raadis qabow oo ah kii ugu horreeyay ee ugxun ee la xiriira ukunta Easter-ka oo ku faafay dhammaan RDR2.
Muxuu ahaa ukunta ciida ee ugu qabow ee aad ku tuntay? Noo soo sheeg faallooyinka!
Red 2 furashada dhintay ayaa hada banaanka yaala.
Playstation 4Red 2 furashada dhintayRockstar GamesdilaagaXbox One
Agaasime Bob Clark iyo Muuqaalka Labaad ee Kirismaska ​​ah ee Aan Hore Loo Arag
'Jimcaha 13-keeda: Bilowga Cusub' Xiddiga Dominick Brascia wuu Dhintay